Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): လက်နက်စွန့်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ခေ တ်အဆက်ဆက်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကံကြမ္မာ
လက်နက်စွန့်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ခေ တ်အဆက်ဆက်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကံကြမ္မာ
at 5/13/2013 06:49:00 AM
Lachid Kachin sharedaphoto.
= ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသမိုင်းဖြစ်စဉ်ထဲမှာ လက်နက်ချေမူန်းခံရသလို့ ကြေပြုန်းသွားရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းရယ်
လို့ မကြားမိသေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ လက်နက်ချတာပဲ ဆိုဆို။အလင်းဝင်တာပဲပြောပြော လက်နက်စွန့်သွား
တဲ့အဖွဲ့တွေ ကြေပြုန်းသွားကြတာ များစွာရှိပါတယ်။
(၁၉၄၅)ခုနှစ်ထဲမှာ လက်နက်နဲ့ဒီမိုဂလဲလှယ် ဆိုပြီး ပြည်သူရဲဘော်ရှိပါတယ်။ ပါတီ၊ ဦးလှဖေ ဦးဆောင်တဲ့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၊နိုင်အောင်ထွန်း ဦးဆောင်တဲ့ မွန်ပြည်သူ့တပ်၊ ဦးစိန္ဒာ ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်သူ လွတ်မြောက်ရေးပါတီတွေ လက်နက်ချသွားကြတယ်။
အဲ့ဒီအဖွဲ့က ခေါင်းဆောင်တွေဟာ(၁၉၆၀)မှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီး အချို့ဝန်ကြီးတွေဖြစ်၊ အချို့လည်း အမတ်တွေဖြစ်၊ ဒါပေမဲ့(၁၉၆၂)ခုမှာ ထောင်ထဲရောက်သွားကြရတယ်။
ဘယ်မှာလဲ အားမခံချက်နဲ့ တော်လှန်ရေးအသီးအပွင့်။ (၁၉၆၃) မှာ ကရင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေးထဲ
က သမ္မတလို့ သူ့ အသိုင်း အ၀ိုင်းကခေါ်ဆိုနေတဲ့ မုဆိုးကော်ကဆာစောဟန်တာသားမွေးနဲ့ ဗိုလ်မုး
ကြီးလင်းထင်တို့ရဲ့  (KGB)အဖွဲ့ လက်နက်စွန့်သွားတယ်။
၀င်ခါစမှာ စောဟန်တာမွေးဟာ ရာထူးကြီးကြီးနဲ့ တိုက်တလုံး ကားတစီးရခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ၂-နှစ်လောက် အကြာမှာဗိုလ်လင်းထင်အသတ်ခံရပြီးစောဟန်တာသားမွေးလည်းသာမန်အရပ်သားဘ၀ရောက်သွားခဲ့ရ တယ်။
ပြီတော့ တချိန်တုန်က အယူအဆ ရေးရာမှာ တောက်ပြောင်ခဲ့တဲ့ အလံနီ ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်း
သခင်စိုးကြီးလည်း ငြ်ိမ်းချမ်း ရေးတံခါကိုခေါက်ပြီး ဖွင့်မယ်လို့ကြွေးကြော်ကာလက်နက်စွန့်သွားတယ်။
မကြပါဘူး ထောင်ထဲရောက်ပြီး ဘ၀နိဂုံးချုပ်သွားရတယ်။
(၁၉၉၀) ကျော်လောက်မှာစစ်အင်အားတသောင်းလောက်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့ရှမ်းပြည်တည်ထောင်မယ်လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့တဲ့ခွန်ဆာဟာ(၁၉၉၆)ခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာလက်နက်ချပြီးစစ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းသွားတယ်။ ခွန်ဆာရဲ့ ဦိးတည်ချက်နဲ့ တော်လှန်ရေးအမွေးအနှစ်ဘာတွေဖြစ်ပြီးဘာတွေကျန်ခဲ့တဲ့၊ လေ့လာကြည့်စမ်းပါ။ (၂၀၀၅) ခု နှစ်ထဲမှာရှမ်းပြည်အမျိုးသားတပ်မတော် (SSNA)က တပ်မဟာမုး ကန်နနဲ့ ကွန်းခေတို့ (လားရှိုး-သိန္နီ အခြေစိုက်)သူတို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့နဲ့အတူ လက်နက်အပ်ခဲ့တယ်။
ပလောင်ပြည်နယ်လွန်မြောက်ရေးပါတီ(PSLP)ကဦးအိုက်မွန်းနဲ့(မန်တုံဒေသအခြေစိုက်)အဖွဲ့များလက်နက်အပ်ခဲ့တယ်။လက်နက် အပ်ပြီး မကြာခင်မှာ ပလောင်ဒေသအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါရောင်းဝယ် ဖြန့်ဖြူမူတွေနဲ့ လုယက်မူ၊ အနိုင်ကျင့် မှုတွေ များပြားလာတာကို တွေရှိခံစားကြရတယ်။ (၂၀၀၇)ခုမှာ ပအိုဝ်းနီလို့ အချို့ ခေါ်ကြတဲ့(ရ-လ-လ -ဖ) ခေါ် (SNPLO) အဖွဲ့အတွင်း အကွဲအပြဲဖြစ်ပြီး ဥက္ကဌဗိုလ်မုးချစ်မောင်နဲ့ အဖွဲ့ လက်နက်အပ် လိုက်ကြ တယ်။
အခုတော့အရပ်သားအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီး(၂၀၀၈)ထဲမှာ ဥက္ကဌဟောင်း ဦးတာကလယ်နဲ့ ဥက္ကဌဦးစိန်ရွှေ တို့အကြပ်ကိုင်ခံရပြီး လက်နက်အပ်လိုက်ရပြန်တယ် ။ဒီတော့ သူတို့ဟာ ဂဏန်း လက်မကျိုးမြွေ အစွယ် ကျိုးသလို မိမိလူထုအကျုိုးတွေကိုဘာမှာပြောပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး၊ ဒီလို့အရှေ့ကနှောင်တော်ကြီးတွေ လက်နက်စွန့်ခဲ့လို့ ဘ၀လည်းပျက်၊ဦးတည်ချက်လည်း ပျောက်၊ သမိုင်းအမှိုက်ပုံထဲရောက်ခဲ့ရတာကို တော်လှန်ရေး သံဝေဂ ခိုင်ခိုင်မာမာရခဲ့ကြပြီးလေ။
အခုလက်ရှိ ဦးအောင်မင်း တို့ အဖွဲ့မှ (KIA,SSA,KNU.....)အဖွဲ့တွေကို ပြော ပြောနေကြတဲ့ အပစ်ရပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆိုတာတွေ က အား လုံးဒီအဆင်တွေ(ဒီအကွက်၊ဒီအဖြေ) ဘဲထွက်မယ်ဆိုတာ ကို တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ မရိပ်မိခြင်း(သတိမထား)မိခြင်း လော့.....??
(By-မင်းဟံ ၏ဆောင်းပါးအား LachidKachin မှပြန်လည်ဖြည့်စွက်ထားသည်။)